Raboana Holijaona: “Ny kandidà nahazo ny maro anisa no tokony hohenoin-teny” | NewsMada
Raboana Holijaona: “Ny kandidà nahazo ny maro anisa no tokony hohenoin-teny”
“Ny zava-dehibe amin’izao fotoana izao, ny avy amin’ireo kandidà ao anatin’ny firotsahan-kofidina amin’ny fifidianana no tokony hohenoina. Satria izy ireo no manana ny maro anisa amin’izao fotoana izao.”
Io ny fanehoan-kevitry ny filoha mpanorina ny fikambanana Emergence de Madagascar, Raboana Holijaona, afakomaly, manoloana ny fitakian’ny sasany ny fanemorana ny vokatry ny fifidianana filohan’ny Repoblika natao ny 7 novambra. Eo koa ny fitakiana ny fanafoanana iny fifidianana iny amin’izany.
Nisy olona nifidy ireo kandidà manana ny maro anisa, na ny andaniny na ny ankilany. “Koa vondron’olona vitsy tsy misy manaraka ve no hitarika vahoaka hoe tokony hahemotra ny fifidianana? Tsy fotoan’izany intsony izao”, hoy izy.
Efa naneho ny safidiny ny vahoaka
“Fomba fiady handresen-dahatra avokoa izany hoe manana ny marina ny tena”, hoy ihany izy ny amin’izay fitakiana fanemorana ny valim-pifidianana na fanafoanana ny fifidianana izay. Efa nisafidy ny vahoaka, ary mazava ireny.
Raha sanatria ka izay indray no hampihemotra ny raharaham-pirenena, tsy fotoan’izany izao. Aleo aloha handeha ny valim-pifidianana avy amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC). Samy mamela ny rehetra hiteny ny demokrasia. Fa eo amin’ny hoe iza no mihaino no zava-dehibe. Ny vahoaka no mihaino amin’izao fotoana izao, ary ireny ny valim-pifidianana.
Ny HCC no manana fahefana feno ary manapaka izay hitondrana ny fifidianana, araka ny fanazavany. Ny zava-misy amin’izao fotoana izao: nandeha tamin’ny ara-dalàna ve ny fanisam-bato na ny ordinatera nanaovana izany tao amin’ny Ceni? Heverina fa manana ny ordinaterany koa ny HCC: afa-manao fampitahana ve? Ho hita eo…